Fumanisa ezinye zeenwele ezithandekayo zeenwele ezintle | IBezzia
Susana Garcia | 02/05/2021 20:00 | Ubuhle, Isitayile esinenwele
El iinwele ezintle zihlala zineengxaki ezininzi Kwaye enye yazo kukuba ayinayo ivolumu eninzi. Xa oku kusenzeka into esiyizamayo kukwenza ukuba ibonakale intle ngakumbi kwaye ininzi, inobomi obungakumbi. Yiyo loo nto kukho ezinye iinwele kunye nokusika okunokukunceda ukuba wenze eso sitayile kwizinwele zakho ezikwenza ulibale ukuba zibhityile kwaye azizininzi iinwele. Kukho ezinye iinwele oya kuthi ngazo ukuphucula ukubonakala kweenwele zakho.
Las abantu abaneenwele ezintle mabazinyamekele kwaye ucinge ngendlela yokwenza isitayile ukuze inike ukubonakala okunamandla kwaye okunempilo. Ukongeza kukhathalelo lweemveliso, kuyinyani ukuba inkangeleko ixhomekeke kwindlela esizilungisa ngayo iinwele zethu, kuba sinako ukuvelisa isitayile esahluke ngokupheleleyo.
1 Utshatise midi mane
2 Yiba nesibindi sepixie
3 Uluhlu oludibeneyo
4 UBob usike ngamaza
5 Ukunyamekela iinwele ezintle
Utshatise midi mane
Nokuba iinwele zinokukunceda wenze imane ekhangeleka ngcono ukuba iinwele zakho zilungile. Olu lolunye lwezona zinto zixhaphakileyo, kuba ukuba iinwele zichetyiwe ngokulinganayo, uya kuba nemvakalelo yokuba ininzi kunokuba uyichebe, kuba oko kunciphisa ivolumu. Inkqubo ye- Izinwele ze-Midi zinxibe kakhulu kwaye luhlobo lweenwele inokulungiswa ngokulula. Isinika ubhetyebhetye obukhulu kuba singasebenzisa izixhobo zeenwele kwaye senze iinwele okanye sizinxibe ngokukhululekileyo. Ikwayenye yeenwele ezisefashinini ngalo mzuzu, ke akufuneki uyeke ukuzinxiba. Ungayinika ivolumu okanye amaza kwaye oku kuyakwenza ukubukeka okuthe kratya, ukuguqula iinwele ezintle.
Yiba nesibindi sepixie
Iinwele ezisikiweyo zePixie lukhetho olukhulu. I-pixie kukuba iinwele ezimfutshane kakhulu kodwa ijongeka intle phantse kuwo wonke umntu, nazo zonke iintlobo zeenwele. Ukusikwa kwe-pixie kulula kakhulu ukuyigcina kwaye kusinceda ukuba sijonge ngakumbi kwaye siqhekeze umhlaba, nangona kunzima kwaye ayinguye wonke umntu othanda ukunxiba iinwele ezimfutshane. Ifezekile ukuba unenwele ezithe tye kuba ayizukugoba.
Enye yeenwele esinokuzenza ukuba sineenwele ezinde kwaye zinde kukwenza enye yezo zinwele zinokuthambeka okuthile kuba kubanika ivolumu. Kule meko sithetha ngokuluka. Ukuba siyenza ikame kakhulu, iinwele ezintle ziyaqapheleka, kodwa ukuba simosha kancinci isiphumo siya kwahluka. Kulula kakhulu ukubona ukuba iinwele zinomthamo kangakanani na xa uboya bukhutshiwe kancinci, ke sisiphumo esixhamla olu hlobo lweenwele.
UBob usike ngamaza
El Iinwele ezintle kufuneka ziqhele ukubekwa kumaza, kuba ukuba siyilungisa ngokupheleleyo siza kuyenza ibonakale intle kakhulu. Ukusikwa kwe-bob kuye kwaphinda kwafakwa kwakhona kwaye kunxitywe ngokufutshane kwaye kuyalingana. Ukongeza amanye amaza kule nwele ngumbono omkhulu njengoko unika intshukumo kunye nesitayile.
Ukunyamekela iinwele ezintle
Ukunyamekela kunye nokuthayipha iinwele ezintle kufuneka sithathele ingqalelo ezinye zezinto. Enye yazo kukuba kungcono dibanisa iinwele uze uzimise ngebrashi engqukuva uze uzibethe zomer, kodwa kunye nesixhobo sokwenza amaza ngendlela elula. Kulumkele ukuzithe nkqo okuzilungisa ngokupheleleyo iinwele zakho, njengoko kuya kubonakala ngathi zinomthamo omncinci. Le nwele kufuneka nayo ikhathalelwe kuba yaphuka ngokulula, ke kufuneka ibrashiwe ngononophelo kwaye ibrashi yebrashi yendalo. Ukuba siyambatha ngokufutshane, ibambeka kancinci, kodwa ukuba inde, kufuneka sizame ukuyikhulula ukusuka esiphelweni ukuze singaphuli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ubuhle » Iinwele zeenwele ezintle